SAWIRO: Kooxda Al-Shabaab oo soo bandhigtay 86 Odayaal dhaqmeed oo ay Cafis ufidiyeen. – Kismaayo24 News Agency
SAWIRO: Kooxda Al-Shabaab oo soo bandhigtay 86 Odayaal dhaqmeed oo ay Cafis ufidiyeen.
by admin 4th August 2019 041
Xooggaga Al-Shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay deegaanka Buq Aqable ee gobolka Hiiraan ku soo bandhigay illaa 86 oday dhaqameed oo ay sheegeen inay ka mid ahaayeen ergadii soo xushay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Goobta lagu soo bandhigay odayaashan waxaa ku sugnaa Sheekh Yuusuf Kaba Kutukade oo ah guddoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe, Sheekh Guuleed Abuu Nabhaan guddoomiyaha gobolka Hiiraan iyo Sheekh Abuu Cadnaan oo ah Guuddoomiyaha gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya.
Al-Shabaab ayaa shaacisay in odayaashaasi ay isugu jiraan 53 oday dhaqameed oo ka tegay HirShabelle iyo 33 ka imaatay deegaanada maamulka Galmudug.
Sidoo kale waxa ay mas’uuliyiinta Al-Shabaab sheegeen in odayaashaasi ay aqbaleen baaqoodii, islamarkaana la cafiyey, sida ay hadalka u dhigeen.
Dhowaan Al-Shabaab ayaa shaacisay in ay deegaanadooda iska soo diiwaan geliyeen illaa 159 oday oo ka mid ah ergadii soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Bayaanka Al-Shabaab ee la xariira ergada ayaa soo baxay 15-kii bishii hore ee July, iyaga oo markaasi u qabtay odayaasha inay isku soo diiwaangeliyaan muddo 45 cisho ah, kadib markii ay ku eedeeyeen inay ku kaceen fal Gaalnimo ah.
Madaxda Qaranka Somaliya oo ka qeyb galay Salaada Janaasada ee Meydka EngYariisow.
TOP NEWS: Maxaad kala socotaa Banaanbax looga soo Horjeedo Ciidanka Amisom oo Maanta Jowhar ka dhacay???
XASAASI: FAH-FAAHINO Laga helayo dagaalkii shalay Galmudug iyo Puntland dhex marya, Iyadoo………………(Maxaa tolow laga soo sheegayaa???)